दशैको छेको पारेर सरकारी अनुगमनले गति लियो,दरवारमार्गका ब्यापारीलाई कस्ले तनाब दियो ? » aarthikplus
दशैको छेको पारेर सरकारी अनुगमनले गति लियो,दरवारमार्गका ब्यापारीलाई कस्ले तनाब दियो ?
काठमाडौं । अरुबेला सुतेर बस्ने आरोप लागेको आपूर्ति विभाग दशैंको मुखमा भने सक्रिय देखिएको छ। आपूर्ति विभागले बिहिबार दरवारमार्गका विभिन्न पसलहरुमा छापा मारेको छ। लत्ताकपडा, खाद्यान्नसँगै उपत्यकाभित्र बाहिर गर्ने सार्वजनिक यातायातमा पनि अनुगमन सुरु गरेको छ। बिहिबार विभागले दरबारमार्ग, न्यूरोड, असन लगायत बजारमा रहेका सपिङ आउटलेट अनुगमनका लागि छ वटा समूह परिचालन गरेको जनाएको छ।
दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलमा विभागको अनुगमन टोली आएको पत्तो पाउने वित्तिकै सटर बन्द गरिएको अनुगमन संयोजक एवं विभागका शाखा अधिकृत कपिलप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। ‘अनुगमनको काम हामी वर्षैभरी गर्छौँ। तर चाडवाडको बेला सर्वसाधरण नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो बाक्लो उपस्थिति हुनु स्वभाविक हो। उपभोक्ताले गुनासो उठाएको अवस्थामा हामी अनुगमनको लागि २४सै घण्टा तयार छौँ,’ रेग्मीले भने, ‘व्यवसायीहरुले कागजपत्र देखाउँदा हामी भ्रममा पर्यौँ भने यही क्षेत्रका दक्ष विज्ञलाई अनुगमनमा परिचालन गर्नेछौँ।’ विभागका कर्मचारीले कागजपत्र नदेखाएको भन्दै २० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका थिए।
अनुगमनका क्रममा टोलीले दरबारमार्गस्थित बेन्ट्लीलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। ‘उहाँहरुले क्रय र बिक्री मूल्य स्पष्ट रुपमा देखाउनु भएको छैन। उहाँहरुले खरिद विल र विक्री मूल्य देखाउनै गाह्रो मान्नु भयो। अनुगमन टोलीलाई असहयोग गरिएको पाइएपछि हामीले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका हौँ’ उनले भने।
टोलीले चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा विक्री गर्न राखिएको सुपारीमा उत्पादन मिति र एक्सपाइरी डेट नभएको कारण ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। विभागले उपत्यकाबाट बाहिर चल्ने एसी, डिलक्स गाडीले ४० प्रतिशतसम्म भाडा महँगो लिएको पाइएको जनाएको छ। एसियुक्त गाडीमा ४० प्रतिशत र डिलक्स गाडीमा २० प्रतिशत बढी टिकट भाडादर उठाइएको उजुरी आएको उनीहरुले बताए।